Pearls ee Switzerland Safarka 5 * Saaxiibtinimada Bvlgari
Tilmaamaha dalxiiska ee Miisaaniyadda saaxiibtinimo Dubai
Cristina - Pearls ee Switzerland
Luulyo Iswisarland - Xeebta Bvlgari Dubai, macluumaad xiisa leh iyo saacado la yaab leh oo ah 24 saacad leh oo leh Jawharka Iswidishka socdaalada, safarada iyo inbadan…
Pearls ee Switzerland ee Dubai
Ku soo noqo Switzerland Switzerland Suuqa Safarka Carbeed (ATM) dhacdo ka dhacday Dubai halkaas oo aan kula kulmay duq iyo saaxiibo cusub iyo shuraako ganacsi.
Mahadsanid gaar ah Rashaad Oudeh, CEO ee CEDEM AG Switzerland. Waxay tabarrucday ATM Women in Travel meetup-ku hadla oo hadiyado iyo lataliyeyaal ah. Alessandra Alonso ee haweenka safarka ku jira waxaa casuumay Sarah Gasim oo ka socota NEOM Saudi Arabia, Emma Banks Madaxweyne kuxigeenka, Istaraatiijiyadda & F&B F&B Europe, Bariga Dhexe iyo Afrika oo ka socda Hilton iyo Andrea Bailey oo ka socda La-taliyayaasha Safar si ay uga hadlaan gole diiradda lagu saaray fursadaha ay heli karaan dumarka safarka iyo dalxiiska ee wadamada GCC, munaasabadda ATM2019.
Bisha Sebtembar waxaan soo dhoweyn doonaa qaar ka mid ah wakiilada safarka ee ka socda Kuweyd Switzerland. Waxaan raadineynaa kafaala-qaadeyaal doonaya in lagu soo bandhigo inta lagu jiro usbuuca gudbinta ee Switzerland. Fadlan nala soo xiriir oo let's plan sida aan u wada shaqeyn karno.
Intii aan joogay Dubai, waxaan kormeeray 5 * raaxada Bvlgari Resort. Tan meel guriga ka fog! Makhaayadaha Bvlgari Resort Dubai, waad ku damaashaadin kartaa La vita e dolce oo aad ku raaxeysan kartaa asturnaanta. Xusuusnow in Dubai ay ka mid tahay meelaha ugu safarka badan adduunka ee dalxiis oo aad u mashquul badan. Halkan waxaad ku nasan kartaa oo fasax qaadan kartaa.
Ku hees Sii Warsidaha Cristina
Saacadaha 24 ee Pearls ee safarka Switzerland, safaro iyo waxyaabo kale oo badan
Aragtida ka timid Bvlgari Resort & Residences Dubai
Jawharka Switzerland - Dubai waa magaalada ugu weyn ee Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE) oo leh in kabadan 9 milyan oo deggan. Magaalada Abu Dhabi waa magaalada caasimada ah UAE. Waxaan booqday wadanka markii ugu horeysay 1998. Magaaladu si joogto ah ayey u kortay oo wax badan ayaa iska beddelay. Tan iyo agagaarka 1833, Dubai waxay ahayd deked ganacsi. Maanta dhaqaaluhu wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga, dalxiiska, duulista, guryaha iyo guryaha koritaanka adeegyada maaliyadeed.
Sanadka Dulqaadan - HH Sheikh Khalifa bin Zayed dhawaaqay 2019 oo ah Sanadka Xasiloonida. The ogeysiis ujeedadiisu tahay in lagu muujiyo UAE inay tahay caasimad caalami ah oo loo dulqaato iyo qaabkeeda, tan iyo markii la aasaasay, inuu noqdo buundada isgaarsiinta ee ka dhexeysa dadka dhaqamada kaladuwan ee jawi ixtiraam leh oo diida xagjirnimada kuna nuuxnuuxsaday aqbalaadda midka kale.
Read halkan taariikhda Dubai.
Dubai Al Maktoum International Airport Dubai World Central (DWC) daqiiqado 45 baabuur (oo ku xiran gaadiidka) Madaarka Caalamiga ah ee Dubai Dubai International (DXB) daqiiqadaha 25 ee baabuurka (ku xiran gaadiidka)
Soo hel halkan hadaad ubaahantahay a fiiso galaan Imaaraadka.
Maajo 2019 © Xuquuqda daabacaadda daabacan ee Switzerland. Qoraalka iyo sawirrada Cristina Tschuppert.
Shaqaalaha dhoola caddeynta ah ee laga soo galo albaabka Bvlgari Resort & Residences Dubai ayaa si diiran igu soo dhoweeyay markaan imaado aroortii. Waa xaq meel hadaad jeceshahay inaad la kulanto oo aad ku raaxaysato nolosha dhabta ah ee wanaagsan. Dalxiiska & Deganaanshaha Bvlgari ee ku yaal Dubai waxay ku taal jasiirad khaas ah oo qaabkeedu yahay 300 mitir oo ka baxsan xeebta Dubai. Halkan waxaad ku dareemi doontaa sida jasiirad yar oo Talyaani ah. Adduun qumman oo lagu nasto waxaadna ku raaxeysataa deganaansho leh ikhtiyaar aad ku joogto bartamaha magaalada markasta oo aad rabto. Haddii aad raadinayso xeebta biyaha buluugga ah ee buluugga ah iyo beerta tani waa Meesha la tagayo markii la tagayo Dubai.
Waxaan quraacday Mrs. Laura Antony (Kaaliyaha iibka Manager - Warshadaha Safarka) oo waanu amarnay Isku-dhafan Cabitaan liin, Jasmine Green Tea, Eggs Benedict oo leh Qamadi Salmon | Buffalo Burrata leh Cherry Tomato, Taggiasche Olives, Pesto | Kalluubka, Beeraha xayawaanka, Mooska iyo Khariidadda Khariidada Xayawaanka ah | Bircher Muesli iyo Wild Berries.
Ku fadhiisashada balakoonka ballaaran waxaan ka helnay codka shimbiraha heesaha iyo aragtida aragtida Bvlgari Yacht Kulanka. Cuntada ayaa si kulul loo kariyey waxaana loogu adeegay qosol. Wax walbana way qummanaayeen oo jacayl baa loo diyaariyay.
Halkan waxaad ka filan kartaa fasalka koowaad iyo adeegga shakhsi ahaaneed.
Ka daawo Bvlgari Dubai video
Plus dhibicda guriga:
25 min. kana timid Dubai International Airport DXB.
6 Km laga bilaabo Burj Khalifa iyo Dubai Mall.
Waxay ku taalaa 5 Km wadada Shaikh Zayed.
Xeebta A gaarka loo leeyahay ee '600m' oo loogu talagalay martida hudheelka.
Qoyska-Saaxiibtinimo: Naadiga yar ee Gems loogu talagalay carruurta.
Carabi, Ingiriis, Talyaani, Faransiis, Hindi, Jabbaan iyo shaqaalaha ku hadla Mandarin.
6 F&B dukaamada ay kujirto abaalmarinta Hōseki Jabbaan Japanese saxeex makhaayad.
Ciyaaraha biyaha iyo nashaadaadka markab qorrax dhaca.
Helitaan fudud iyo duruufaha koorsooyinka Golf ee kuugu dhow.
Xarunta waxay bixisaa qolal 101 iyo qolal qolal leh, oo ay ku jiraan Qolalka Sare, Deluxe Beach View Rooms, Premium Ocean View Qolalka (dhammaantood waa qolal waa 55 m2), Junior Suites (80 m2), Deluxe Suites (105 m2) iyo The Bvlgari Suites (120 m2).
Xoolladaha Hoteellada Weyn ee 20 Bvlgari, oo ay ku jiraan hal qol jiif oo muuqaal xeebeed ah villas (175 m2), laba-qolka jiifka fiidiyaha ah ee muuqaalka xeebta ah (250 m2), laba-qol jiif oo muuqaal ah oo fiid ah (250 m2), muuqaalka sedex qol jiif jiifka ah (315 m2) iyo The Bvlgari Villa (540 m2). Dhammaan 20 Bvlgari Villas waa guri ka fog guriga Dhammaantood waxay si qurux badan u bixiyaan tayada ugu fiican tayada alaabta talyaaniga.
Hotel Poll Villa labo qol jiif leh oo leh muuqaal xeebta ah
Kooxda Bvlgari yacht Club Dubai Restaurant
Shukulaatada Bvlgari waxaa loo yaqaanaa "abuur qajaar" shukulaato "dahabka Roomaanka. Waa khibrad-kobcinta dareenka in daaraha ugu casrisan si dhakhso leh u aqoonsan doonaan una qaddarin doonaan sida Bvlgari saafi ah. Dhamaan dadka jecel shukulaatada riyo! Daawo video
The Bvlgari Spa waxay bixisaa daaweyn iyo daweyn jidheed, badeeco iyo adeegyo. Saacadaha furan ee daaweynta: 9 AM - 10 pm
Xarumaha cuntada: 7 am - 11 pm
Alaabta qurxinta ee Bvlgari iyo Badda waxaa laga iibsan karaa irridda soo dhaweynta quruxda iyo sidoo kale qaar ka mid ah dharka xeebta.
Booqda Buuxda ee Bukhaarka Bvlgari
Baro Fioreverever - Fioreverever waa canshuur jacayl, jacaylka iyo farxadda nolosha. Mr. Mohammad Malik Mebar waa La-Taliyaha Iibka ee Macaamiisha iibka ee Bvlgari Dalxiis & Degitaan Dubai. La xiriir haddii aad rabto inaad iibsato Fiorever.
Halkan waxaad ka iibsan kartaa alaabooyinka Bvlgari hadiyad ahaan ama wax uun naftaada u samee: buugaagta, cadarada, shumacyada, dharka, waxyaabaha kale iyo waxyaabo kaloo badan. Bakhaaro leh alaabooyin fara badan.
Bvlgari iyo Badbaadinta Carruurta
In la xuso wada shaqeynta mudada toban sano ah ka dhaxeysa Bvlgari iyo Save the Children, Bvlgari Majlis wuxuu martigelinayaa bandhig gaar ah oo ka tarjumaya 10 sano oo safar ah oo ay qabteen Save the Children iyo Bvlgari si loo taageero waxbarashada carruurta.
Akhri wax dheeraad ah halkan.
Alaabada loo yaqaan 'Bvlgari Jewelery Boutique La Mer' Spa & Fitness Dukaammada wax lagu iibsado.
Bvlgari Hotel cusub ayaa lagu wadaa inay furto:
Gaadiidka: Maserati, Mercedes, BMW iyo Chevrolet
Soo dhaweynta Deira, Dubai
Deira waa aag ku yaal magaalada Dubai xadka ay wadaagaan Gacanka Faaris, Sharjah iyo Dubai Creek.
Taariikh ahaan, Deira ayaa ahayd xarunta ganacsiga ee Dubai. laakiin waxay lumisay muhiimadeeda muddooyinkii la soo dhaafay horumarintii ugu dambeysay ee soo marta Wadada Sheekh Zayed iyo aagagga xeebta ku teedsan ee Abu Dhabi.
Port Saciid waa deked yar dhanka Deira xeebta Dubai Creek. Port Saciid waxay haysaa qaar ka mid ah maraakiibta doonyaha dheereeya iyo doomaha yaryar ee maraakiibta ee ku sugan Dubai.
Booqashada waa booqashooyin caan ah marka laga hadlayo Dubai. Qarniyo, alaabada safra kana yimid Hindiya, Afrika iyo Aasiya wada socda Waddada Iskudhafka ah waxaa laga ganacsan jiray degmooyinkaas ka soo jeeda.
Waa booqasho waa booqashada Gold Souq. Waa magaalada Dubai ee ugu caansan uguna booqashada badan ee souq oo soo bandhigaya xulasho aad u fara badan oo nooc kasta oo dahab ah ah. Qaybaha qurxinta ah waxay u dhexeeyaan minjilyo jilicsan ilaa hubka buuxa, qalab dheeri ah oo ka dhigaya souk ku habboon aroosyada mustaqbalka doonaya inay helaan gogol-dhaaf u gaar ah kor u qaadaan maalintooda gaarka ah.
Dahabka dahabiga ah ee adduunka ayaa ah Najmat Taiba (Star of Taiba) oo ay abuurtay Taiba for Gold iyo Jewelery Co., Ltd, oo ah Saudi Arabia. Giraanta waxaa lagu dhejiyay 5.17 kg oo dhagaxyo qaali ah laga soo bilaabo Saxiixa Bariga Dhexe oo lagu taagay giraan dahab ah oo loo yaqaan '58.686 kg 21 carat dahab, oo ay taageerto Golaha Dahabka Adduunka, UAE oo leh isugeyn culeyskoodu yahay 63.856 kg. Oo Haah, Dahab waa weligeed iyo xigmad maal-gashiga! Farshaxanka ilaalinta hantida: Gold
Spice Souq wuxuu ku yaalaa meel ku xigta Gold Souq. Maxaa la soo gadanayaa? Qoraxda, koofiyado, xiirto, xumbo, shaah iyo xawaash badan iyo dhir.
Waxaan kugula talineynaa makhaayadda Lubnaan Babel waayo, badda iyo maqaayad at La Mer by Meraas on
aagga xeebta ee Jumeirah 1. Kudar ka mid ah Dubai Waxay leeyihiin saddex laamood Lubnaan iyo sidoo kale mid ka mid ah Kuwait. Maqaayadda waxaa loo haystay in ka badan laba heer waxayna leedahay dhul ballaadhan. Farxad weyn, cunno qaali ah iyo shaqaale saaxiibtinimo badan leh. Waxay leeyihiin bar weyn oo hilibka badda ah iyo waliba meel lagu cunteeyo oo gudaha ah. Waxaan ku jirnay fadhiisiga fadhiga balakoonka waxaanan haysanay qaar ka mid ah suxuunta mezze sida shrimps Beiruty iyo duub farmaajo. Sidoo kale waa nalagu adeegay miro furan iyo nacnac!
Boos celinta miiska: + 971 4 419 0220
Saacadaha 24 ee Dubai oo leh Pearls of Switzerland safarka, safaro iyo waxyaabo kale oo badan
Fadlan waxaad xor u tahay inaad si toos ah ugula xiriirto hoteelka cinwaanka emailkooda: reservations@pearlsofswitzerland.com haddii aad jeceshahay inaad tagto booqasho si Dubai ah.
Haddii aad raadineyso wax badan macluumaadka ku saabsan shaqooyinka huteelada ee Dubai. Hoos ka daawo muuqaalkeena blog dhaji waxaan rajeyneyaa inaan kugu arko Imaaraadka Emirates.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa tilmaamo wanaagsan nolosha Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda ka heli kartaa hagitaanno, talooyin iyo shaqaalaynta United Arab Emirates oo leh luqaddaada.